I-Xianglong Metal 12 Inkinobho yekhiphedi ku-Elevator Control Project-Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Xianglong Metal 12 Inkinobho yekhiphedi Ngo Elevator Control Project
Isikhathi: 2020-11-04 Hits: 26
Kuleli sonto, ama-500ama-pcs Metal 12 Button Keypads afakiwe kuphrojekthi yokulawula i-Elevator yekhasimende lase-US. Ikhasimende lethu labelane ngezithombe zokufaka ngenhla futhi lisitshele ukuthi baneliseke kakhulu ngamakhiphedi ethu. Zonke izinkinobho zilungile futhi zisebenza kahle lapho.
I-Xianglong Inkinobho yekhiphedi engu-12 B515 ungomunye wemikhiqizo edayiswa kakhulu, unengxenye ayidlalayo ekuphathweni kokulawulwa nasekuphathweni kwezokuphepha.
Isilinganiso esingenamanzi sekhiphedi yensimbi sikhuphukele ku-IP65. Kuzilungele kahle izifunda ezinezimo ezinomswakama ophezulu nezimo ezinzima. Ngaphezu kwalokho, ikhiphedi yenziwe ngezinto ezimangelengele Zinc Alloy material, okhiye abahamba nge-0.45mm kanye nomjikelezo wempilo ufinyelela ngaphezu kwezigidi eziyi-100.
Xianglong inikeza anhlobonhlobo zensimbi & plastic ilokhi yekhiphedi nezinsizakalo ezihlukile kumakhasimende. Ngentuthuko yeminyaka engu-14, singakwazi ukwenza ngezifiso amakhiphedi ahlukahlukene angajwayelekile kumakhasimende ngokushesha. Ukuthatha ukuhlinzeka ngama-keypads ezimboni nawezempi anokwethenjelwa futhi athambile nezingcingo eziphathwayo umsebenzi wethu wenkampani, sigxila ekubeni ngumholi womhlaba wonke kukhiphedi yezimboni nakumahendisethi ezokuxhumana ngocingo!
Ngemininingwane engaphezulu. wamukelekile ku-eamil us noma uphenyo ku-www.yyxlong.com. Sihlala sikulungele ukukuzuzela amaphrojekthi!
Okwedlule: I-Handset ephezulu ye-Magnetic & Hearing Aid Loop eyakhelwe izingcingo eziphuthumayo
Okulandelayo: Kungani uJack Obhalisiwe ehlukaniswe ngo-RJ45, RJ12 no-RJ11?